ज्यानको बाजी लगाएर आन्दोलनमा लागेका जनताले निधीलाई भोट दिदैनन् : राजेन्द्र महतो
न्यूजअभियान | प्रकाशित मिति : २०७४ कार्तिक २० सोमबार |
राजेन्द्र महतो, नेता, राष्ट्रिय जनता पार्टी
आगामी प्रतिनिधिसभा चुनावमा केही क्षेत्रमा रोचक प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । विभिन्न क्षेत्रमध्ये धनुषा क्षेत्र नम्बर ३ पनि चर्चामा छ । उक्त क्षेत्रमा नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधी र राजपाका राजेन्द्र महतोबिच कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ । यसै विषयमा एक उम्मेदवार राजेन्द्र महतासँग ऋषि धमलाले कुरा गरेका छन् । नेपाली रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम नेपाली बहसका लागि गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
तपाईले निर्वाचन लड्नका लागि धनुषा क्षेत्र नम्बर ३ किन रोज्नुभयो ?
हामीले यो निर्वाचनलाईसमेत आन्दोलनकै रुपमा लिएका छौँ । धनुषा भनेको आन्दोदनको केन्द्रविन्दु हो । मधेशकै केन्द्र भनेको धनुषा हो । मधेश र मिथिलाको आत्मा हो धनुषा । यो निर्वाचनलाई आन्दोलनको रुपमा प्रयोग गर्ने भनेर पार्टीले गरेको निर्णय अनुसार म धनुषा क्षेत्र नम्बर ३ बाट चुनाव लडेको हुँ ।
धनुषा ३ मै जानुपर्ने कारण के ?
३ नम्बर क्षेत्र भनेको जनकपुरसमेत हो । यही क्षेत्रबाट नै मधेशको सन्देश जान्छ । विगतका आन्दोलनमा जुन दमन र हत्या भयो, त्यसको केन्द्र यही क्षेत्र हो । मधेशको भोट लिएर मधेशीलाई नै समाप्त गर्ने नेताहरु विगतमा यही क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गरेका थिए । मधेशी जनताको भोटको दुरुपयोग गर्ने काम विगतमा यही क्षेत्रका प्रतिनिधिले गरेकाले यसपटक त्यसलाई तोड्नका लागि म उम्मेदवार बनेको हुँ ।
यस क्षेत्रबाट चुनाव जित्नुभएका कांग्रेका नेता विमलेन्द्र निधीले त मधेशी जनताको हितमा काम गर्ने नेता मै हूँ भनेर दाबी गर्नुभएको छ नि ?
कांग्रेस पार्टीभित्र मधेशको ठेक्का लिने, मधेशीको भोट पनि लिने अनि मधेशको विरुद्धमा नै प्रयोग गर्ने काम विमलेन्द्र निधीले नै गरेका छन् । संविधान निर्माणमा हस्ताक्षर गर्ने र गराउने पनि उहाँ नै हो । मधेशीले संविधानमा अधिकार नपाउनुमा निधीकै भूमिका छ ।
मधेशी जनताको हितमा काम गरेको दाबी निधीले गर्नुभएको छ । तपाईले आरोप लगाएर मात्र हुन्छ ?
मधेशी जनतामाथि गोली चलाइयो । हो निधीले धेरै काम गर्नुभएको छ । ६ जना मधेशी जनतालाई गोली हानेर एकै ठाउँमा ढाल्न काम उहाँले नै गर्नुभएको हो । मेचीदेखि महाकालीसम्म दर्जनौँ मधेशीका सन्तानलाई सहीद बनाइएको छ । मधेशीले प्राप्त गरेको अधिकार पनि खोसिएको छ । यो सब काम निधीले गर्नुभएको हो ।
तपाई सर्लाही निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ मा जाने कुरा थियो ?
म किन सर्लाही जाने ? हाम्रो लडाई त सर्लाहीमा मात्रै होइन नि । हामी त मेचीदेखि महाकालीसम्मका मधेशी जनताका लागि हो । जहाँ मधेशीलाई धेरै अत्याचार गरिन्छ, त्यहाँ लडाई केन्द्रित हुन्छ । मधेशीको मत लिएर मधेशीकै अधिकार खोस्ने नेतामाथि प्रहार गर्नका लागि म धनुषा क्षेत्र नम्बर ३ बाट चुनाव लड्न लागेको हुँ ।
विमलेन्द्र निधीलाई जित्न सक्नुहुन्छ ?
जनतासँग शक्तिशाली व्यालेट छ । अब त मधेश आन्दोलनमा लागेका जनता छन् । ज्यानको बाजी लगाएर आन्दोलनमा लागेका जनता छन् । त्यही आन्दोलनमा जनता कसले मारेको हो भन्ने कुरा जनतालाई राम्रोसँग थाहा छ ।
मधेश आन्दोलनमा विमलेन्द्र निधीको भूमिका थिएन ?
गोली ठोक्ने भूमिका त थियो नि । हाम्रो भूमिका गोली खाने थियो । उहाँको भूमिका त गोली ठोक्ने थियो । भूमिका त निर्वाह गरेकै हो नि ।
निधीले त मधेशीको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ भनेर संघर्ष त गर्नुभएको छ नि ?
उहाँले मधेशीका नाममा जेजे काम गर्नुभयो, त्यसको हिसाब किताब लिने बेला आएको छ । उहाँको हातमा बुलेट हुँदा जनतामाथि गोलि प्रहार गरिएको छ । त्यसैले यसपटक जनताले आन्दोलनको पक्षमा मतदान गर्नेछन् ।
विमलेन्द्र निधी र राजेन्द्र महतोबिचमा व्यक्तिगत रिसिइवी छ ?
व्यक्तिगत रिसिबीको सवाल छैन । मधेशी जनताको अधिकार खोस्ने, गोली ठोक्ने र मधेशीको विरुद्धमा संविधान बनाउने त निधी नै हुन् नि । यस्ता मधेशविरोधी काम गर्नेमाथि पहिलो प्रहार गर्नुपर्छ ।
निधीले त संविधान संशोधन गरेर मधेशीको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ भनेर संविधान संशोधनको प्रयास गर्नुभएको होइन ?
प्रधानमन्त्री बन्नका लागि ३ सय ८८ भोट ल्याउन सक्नेले संविधान संशोधन गर्नका लागि किन ल्याउन सकेन ? अहिले जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम गरेर हुँदैन ।
कांग्रेसले महन्थ ठाकुरलाई चाँही समर्थन ग¥यो । तपाईलाई किन गरेन ?
यो कुरा मलाई केही थाहा छैन । लोकतान्त्रिक गठबन्धनको कुरा भयो, काम भएन । लोकतान्त्रिक गठबन्धन बन्न नसक्नु पनि विमलेन्द्र निधीको दोष छ । अहिले कसले कसलाई समर्थन ग¥यो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ ।